VevoCart: Iyo Yakazara Inoratidzwa ASP.NET Ecommerce Platform | Martech Zone
Vaka bhizinesi rako repamhepo neVevoCart chikuva uye iwe unowana yakazara-inoratidzirwa e-Commerce chitoro iyo inogadziriswa kwazvo, inotyisa uye inogadziriswa zvizere ine yakazara ASP.NET C # sosi kodhi inosanganisirwa. Unogona nyore gadza VevoCart uchishandisa iyo Microsoft Web Platform inosimudza or download it kunanga.
Kupindura Dhizaini / Nhare Yakagadzirira - VevoCart inouya neyakagamuchira dhizaini, dhizaini iyo inokodzera chero chishandiso kungave desktop, laptop, piritsi, kana nhare mbozha NaVevoCart, haufanire kunetseka nezvekugadzira zvigadzirwa zvakasiyana zvinoenderana.
PA-DSS Certified - VevoCart ndeye ASP.NET PA-DSS inoenderana eCommerce application. VevoCart inobhadhara mubhadharo kuburikidza neVevoPay iyo yakaongororwa zvizere nemuongorori anokwanisa uye iri PA-DSS yakasimbiswa kubhadhara chikumbiro.
Multi-Chitoro Rutsigiro - VevoCart Multi-Store vhezheni inobvumidza vashambadzi kushandisa akawanda masitoreti ane mazita akasiyana edomain vachigovana dhatabhesi imwechete uye yepakati kubhadhara kubhadhara.
Pfuma Yekutengesa Chishandiso - VevoCart kushambadzira maturusi akagadzirirwa kuve anochinjika uye anotyisa kutsigira mazhinji marudzi emakambani ekushambadzira. Zvishandiso izvi zvinobvumidza kambani yako kukwezva vatengi vazhinji, kuvaka kwavo kuvimbika, kumisikidza kuvimba uye kuzivikanwa kwechiratidzo.
Pedzisa eCommerce Zvimiro - Unogona kuwedzera zvisingaverengeki zvikamu uye zvigadzirwa. Pane akati wandei echigadzirwa hunhu iwe hwaunogona kuseta VevoCart inotsigirawo akawanda-zvitoro uye akawanda-mitauro maficha. VevoCart inosangana nemakambani akati wandei ekutakura uye epamhepo ekubhadhara. Zvimwe zvinhu zvinosanganisira zvekushambadzira zvishandiso, analytic ripoti, kuratidza mamiriro, zvemukati mapeji, uye zvimwe.
Premium Chitoro Dhizaini - VevoCart inouya neyazvino matemplate dhizaini ayo achaita kuti webhusaiti yako iratidzike zviri pamutemo uye yakavimbika, izvo zvinobatsira kushandura vashanyi vako kuti vave vatengi vako.
Yakasimba Admin Panel - VevoCart Admin Panel inokupa iwe izere kutonga pane webhusaiti yako. Iyo pani inoita kuti iwe ugone kubata zvirinani zvitoro zvako, zvigadzirwa, maodha, vatengi, kutumira uye nzira dzekubhadhara.
Facebook Commerce Facebook shopu ndicho chinobvumidza vatengesi kuwedzera chitoro muFacebook fan peji. Vatengi vanonyorera mu fan peji vanogona kutenga zvigadzirwa zvese sekugara mu shopu webhusaiti.
eBay Kuburitsa eBay ndeimwe yemisika mikuru yekutengesa zvigadzirwa zvako nemasevhisi. Kunyora zvigadzirwa zvako eBay hazvigone kukanganwika! VevoCart inokupa iyo eBay zvinyorwa chishandiso, izvi zvinonyatso kubatsira kuwedzera rako rekutengesa.
SEO & SMO Yakanaka - VevoCart inopa URL canonicalization ficha yekuratidza yako yakasarudzika URL kutsvaga injini. ZveMulti-Chitoro vhezheni, vatengesi vanogona kuseta "Yakasarudzika Chitoro" kuratidza kuti chigadzirwa uye mapeji echikwata anoendeswa kune canonical peji rechitoro chakasarudzwa.
Source Code - Inosanganisirwa VevoCart inosanganisira ASP.NET kodhi kodhi uchishandisa MS SQL 2005 backend dhatabhesi. Izvi zvinokutendera iwe kugadzirisa kodhi yekodhi uye kuwedzera mashandiro ayo nyore.
Imwe Nguva Rezinesi Mari - Hapana Kuenderera Mberi Imwe nguva rezenisi inobvumidza iwe kushandisa yako VevoCart chigadzirwa kwenguva yakareba sezvaunoda. Kwete kubhadhara kwemwedzi. Hapana mari yekutengesa.
Tags: asp.netc#csharpecommerceecommerce chikuvamicrosoft yekutengera ngoromungoro yekutengeravevocart